पहिलो भेटमा पुरुषहरू किन महिलाका यी अंगहरूमा बढी ध्यान दिन्छन् ? यस्तो छ रहस्य – hamrosandesh.com
पुरुषले पहिलो पटक महिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त रु यो कुरा धेरै महिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि युवकको अपरिचित युवतीसँग आँखा जुध्छ । युवकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो युवतीको सिरदेखि पुच्छार सम्म हेर्छ।
पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पुरुषले पहिलो नजरमा महिलाका कुन कुन भाग वा विषयमा ध्यान दिन्छ होला ? मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषले सुरुमै महिलाका यी ५ कुरामा ख्याल राखेको हुन्छ ।
कपाल- पुरुषले महिलाको सरीरमा सुरुमै ख्याल राख्ने एउटा अंग हो कपाल । यसको मतलव पुरुषले निकै लामो कपाल मात्र मन पराउँछ भन्ने होइन । तर सफा, स्वस्थ तथा आकर्षक कपाल भएकी महिलाले पुरुषलाई आकर्षित गर्न सक्छिन् । भनिन्छ युवतीसँग आँखा जुधाइरहँदा युवकले ती युवतीको कपाल सुम्सुम्याइरहेको कल्पना गरिरहेको हुन्छ ।
मुस्कान- के तपाइँको मुस्कान आँखा सम्मै पुग्यो ? अ’र्थात् तपाइँले मुखको मुस्कानसँगै आँखाबाट पनि सोही भाव व्यक्त गर्न सक्नुभयो ? मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषहरु महिलाको मुस्कान बनावटी हो की साँच्चिकै हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छन् । महिलाको ओठ तथा आँखाको भावको अध्ययन गर्न पुरुषहरु सक्षम हुन्छन् भनिन्छ ।
बोली- पुरुषहरु अलि सुरिलो बोली भएका महिलाहरुप्रति आकर्षित हुन्छन् । बोलिको पिच कम भएका वा धोद्रो आवाज भएका महिलाले पुरुषलाई आकषिर्त गर्न सक्दिनन् । मनोविज्ञहरुका अनुसार सुरिलो बोली भएका महिलाहरु बढी स्वस्थ हुने विश्वास पुरुषमा हुन्छ ।
कम्मर र हीपको आकार- पुरुषले महिलाको कम्मर र हिपको आकारमा विशेष ध्यान दिन्छन् । छिनेको कम्मर र चौडा हीप भएकी महिला पुरुषको रोजाइमा पर्छिन् भनिन्छ। यसले महिलाको प्रजनन क्षमता उच्च भएको संकेत समेत गर्छ ।
आँखा- वास्तवमा आँखा पहिलो नजर पर्ने अंग नै हो । आँखाको आकार, नशालु पन, नानीको रङ, परेलाको बनावट लगायतका सबै कुराले महिलाको आ’कर्षणमा प्रभाव पार्छ र यो कुरामा पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छन् ।
के हो स्वस्थ जीवनशैली ?
खराब जीवनशैली रोगहरूको प्रमुख कारण हो भने स्वस्थ जीवनशैली आरोग्य जीवनको आधारमात्र नभएर रोगहरूको औषधि पनि हो । खराब जीवनशैलीका कारण ९० प्रतिशत रोगहरू जन्मन्छन् । स्वस्थ जीवनशैलीबाट नै ९० प्रतिशत रोगहरू ठीक हुने गर्छन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोग तथा मानसिक रोग (नकारात्मक सोचका कारण) जस्ता डरलाग्दा रोगहरू अनुचित जीवनशैलीकै उपज हुन् । र, यस्ता रोगबाट मुक्त हुन आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
चना र मकै झैं मुठीभरि औषधि खाएरमात्र कुनै हालतमा पनि यस्ता रोगहरूबाट मुक्त हुन सकिँदैन । स्वस्थ र निरोगी जीवनका लागि जीवनशैली ठीक राख्न जरुरी छ । स्वस्थ जीवनशैलीका लागि एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन । आहारविहारमा ध्यान दिए पुग्छ । यहाँ आहारको अर्थ व्यापक छ । मुख र जिब्रोले लिने खाद्य पदार्थलाई मात्र आहार मान्नु हुँदैन । आहारको अर्थ हुन्छ, बाहिरको चिज शरीर भित्र लिनु । जेसुकै कुरा पनि हामीले बाहिरबाट भित्र लिन्छौं भने त्यो आहार हो ।
भोजन आहार हो, जसलाई हामीले मुख र जिब्रोद्वारा भित्र लिन्छौं । तर आँखाद्वारा पनि हामीले बाहिरको दृश्य भित्र लिन्छौं । दृश्य पनि आहार नै हो । कानले लिने आवाज, त्वचाले गर्नेे स्पर्श तथा मनले ग्रहण गर्ने विचार र कल्पना पनि आहार नै हो । गलत विचारको आहारले नै अधिकांश मानसिक रोग सुरु हुन्छन् । त्यसैले त भनिन्छ, जस्तो खान्छौं, उस्तै हुन्छौं । त्यसैले आहारको यो महत्ववलाई मनन् गर्दै स्वस्थ जीवनका लागि चार कुरामा विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य छ । सन्तुलित भोजन। शुभाचरण। निद्रा-वि श्राम। शुभविचार
यो नै स्वस्थ जीवनशैली हो । यस्तो स्वस्थ जीवनशैलीलाई व्यवहारमा उतार्न स्वस्थकर नियमको पालना गर्नुपर्छ ।
नियम एक :
बिहान सूर्योदयपूर्व वा ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने बानी बसाल्ने । उठ्नासाथ एकदुई गिलास शुद्ध पानी (कब्जियतले दिसा खलास हँुदैन भने मनतातो पानी) पिएर बाथरुम जाने । दिसापिसाब तथा स्नान गर्ने । दैनिक रूपमा, नसके कम्तीमा पनि सप्ताहको एक दिन स्नान गर्नुपूर्व तोरीको तेल या तिलको तेल या जैतुनको तेलले सम्पूर्ण शरीर मालिस गर्ने । सफासुग्घर लुगा लगाएर शान्त, सफा र खुल्ला ठाउँमा बसेर प्राणायाम, ध्यान तथा योग आसनहरू गर्ने । सकिन्छ भने दिनहुँ पाँच किलोमिटर हिँड्ने या दौडिने । कम्तीमा पनि महिनाको एक पटक उपवास बस्ने ।
नियम दुई :
काम पूरा लगनका साथ गर्ने । परि श्रमअनुसार वि श्राम गर्ने । बढी भोगविलास नगर्ने । विवाहित भए सप्ताहमा एकदुई पटक सहवास गर्ने। समयमै खाने, समयमै सुत्ने र समयमै उठ्ने । गहिरो र पर्याप्त निद्रा लिने । सधैं सत्य, प्रिय र हितकारी वचन बोल्ने । फटाहा कुरा नगर्ने, कटुवचन नबोल्ने । विनम्र व्यवहारको अपेक्षा गरिएजस्तै आफूले पनि विनम्र व्यवहार गर्ने । फजुल खर्च नगर्ने, जुवातास नखेल्ने, व्यभिचार तथा अनावश्यक फेसनमा धन र समय खेर नफाल्ने ।
नियम तीन :
घुस खाने तथा भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता कुकृत्यहरू नगर्ने । जस्तोसुकै आपत्-विपत्मा पनि मनको धैर्यलाई टुट्न नदिने । हिम्मत र हौसला बनाइराख्ने । ठूलाको आदर, असलको संगत र सानालाई माया गर्ने । सधैं सत्य, अनुशासन र न्यायको मार्गमा हिँड्ने । अन्याय र असत्यका अगाडि कहिल्यै नझुक्ने । जातपात, भेषूभषा मत-सम्प्रदाय, लिंग, वर्ण र पेसा आदिको आधारमा कसैसग भेदभाव तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्ने ।
नियम चार :
देशको संविधान र कानुनको पालना गर्ने । देशलाई अहित हुने कुनै काम नगर्ने । सरल र सरस जीवन जिउने । घर सफासुग्घर र फूलहरू रोप्ने । घर बनाउँदा बिहान सूर्यको प्रकाश घरभित्र छिर्ने गरी बनाउने । बेडरुममा अनावश्यक सामग्रीहरू नराख्ने । भित्तामा उत्तेजक तस्बिर तथा धेरै भित्तेपात्रोहरू नझुन्ड्याउने । बिछ्यौना सधैं सफासुग्घर राख्ने । लुगाहरू मिलाएर राख्ने । च्यातिएका लुगालाई नष्ट गर्ने । अध्ययन कोठामा किताबहरू मिलाएर राख्ने । च्यातिएका किताबहरूलाई पुनः बाइन्डिङ गरेर राख्ने । नचाहिने किताबहरू व्यवस्थापन गर्ने । टुटेफुटेका कुनै पनि सामग्रीहरू कोठामा नराख्ने । पत्रपत्रिकाहरूलाई यत्रतत्र नफाल्ने ।
नियम पाँच : जीवनको एक महान् लक्ष्य बनाउने र त्यसका लागि प्रयासरथ रहने । मेहनतको पसिना बगाउने र अनि चैनका साथ सुत्ने ।बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने ।स्वस्थ जीवनशैली भनेकै यही हो । यस्तो जीवनशैली अपनाउने मानिसको जीवन नै स्वस्थ र सुखी हुन्छ ।